Ngwa 6 ihu igwe ka ihu igwe ghara ijide gị na nche 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Kedu onye ihu igwe na-ejidebeghị mgbe ọ na-apụ n'ụlọ na-enweghị nche anwụ? Ma ọ bụ ị gara na-eche na ọ ga-abụ oyi ma nweta nnukwu anyanwụ? Maka ebumnuche ndị a na ndị ọzọ, ịnwe ngwa amụma ihu igwe dị mma iji zere ihe ndị a na-atụghị anya ya. E kwuwerị, ihu igwe dị ebe ahụ iji nyere anyị aka.
Taa, e nwere ọtụtụ ngwa amụma ihu igwe iji zere oge ihere, dị ka ịmị mmiri na-arụ ọrụ ma ọ bụ ịghara ịmịcha ụra n'ụbọchị ezumike ahụ na ogige ahụ. Ọ bụ ya mere SeoGranada ji depụta ndepụta nke kachasị mma taa. Lelee:
AccuWeather bụ otu n'ime ihu igwe ihu igwe ama ama. Ọ bụkwa otu n'ime ihe kachasị ezi, na-enye ezigbo ozi ihu igwe oge, yana ọtụtụ atụmatụ dị jụụ.
Teknụzụ nke AccuWeather ji mee ka otu n'ime amụma ihu igwe kachasị atụ anya taa. A na-adọ aka ná ntị na oké ifufe na / ma ọ bụ mgbanwe mberede na ihu igwe site na ịdọ aka ná ntị ziri ezi, ya mere, ọ dịghị onye jidere na mberede site na ihe omume ihu igwe na-atụghị anya ya.
Na mgbakwunye na ime ka o kwe omume ile amụma maka taa ma ọ bụ izu abụọ site ugbu a, AccuWeather na-enye ozi gbasara ikuku, iru mmiri na ikuku oyi.
Iji budata AccuWeather, họrọ sistemụ arụmọrụ: Android / iOS.
Ngwa Astronomy iji nyochaa Eluigwe na Ala ozugbo
Na Climatempo ị nwere ike ịma banyere ihu igwe ebe ọ bụla. Nwere ike ịlele na ezigbo oge, na mgbakwunye na ịnwe data awa, kwa ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị na-esote.
Iji mee ka ihe niile bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ karị, ọ ga-ekwe omume ịnata ozi metụtara ihu igwe ma mara ihe na-eme n'ụwa. ọ masịrị m wijetị nke ngwa, nanị họrọ ụdị nke ọdịnaya na nweta kpọmkwem site n'ụlọ ma ọ bụ mkpọchi ihuenyo.
N'ime ngwa ahụ enwere ozi gbasara ọsọ ikuku, ọhụụ, nrụgide nke ikuku, ọwụwa na oge ọdịda anyanwụ, iru mmiri ikuku, na ndị ọzọ. Ngwa ahụ ka na-agbaso oké ifufe.
Iji budata Climatempo, họrọ sistemụ arụmọrụ: Android / iOS.
Otu n'ime ngwa eji eme ihe mgbe oge ruru, ihu igwe Yahoo nwere ihe omuma na obi uto, na-eweta otutu foto ndi na-agbanwe na onodu, oge na onodu ihu igwe.
A na-eweputa ozi a n'uju zuru ezu na nkọwa zuru ezu, na nyocha nke ihu igwe ruo ụbọchị iri na-esote. Na maapụ mmekọrịta, ị nwere ike ịchọpụta ọnọdụ okpomọkụ na ebe dị iche iche na ntụzịaka na ọsọ nke ikuku.
Ihe ngosi ihu igwe na-adịghị mma na-enyere gị aka ịhazi ụbọchị gị nke ọma, yana ihe nkiri na-akpali akpali nke na-enye data dịka ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ na nrụgide nke ikuku. Enwere ike ịnweta ụzarị ọkụ ultraviolet (UV), yana iru mmiri nke ikuku.
Iji budata Yahoo Tempo, họrọ sistemụ arụmọrụ: Android / iOS.
4. Ihu igwe na radar
Na ịkọ amụma ihu igwe ozugbo, yana Clima & Radar ị nwere ike igbochi ọnọdụ okpomọkụ site na elekere 24 na-esote ma ọ bụ 14 ụbọchị site ugbu a. Na mgbakwunye, n'ezie, ọtụtụ data ndị ọzọ iji mee ka ihe niile na-aga dị ka atụmatụ, na-enweghị ihe egwu mmiri ozuzo na-emebi ụbọchị ahụ n'ogige ahụ!
Ọ ka nwere ike ịchọpụta ọsọ ikuku, ọhụhụ, ihe puru omume nke mmiri ozuzo, ọwụwa na oge ọdịda anyanwụ, mmetụta ọkụ, n'etiti ọtụtụ ozi ndị ọzọ. Iji nweta data ziri ezi, ịnwere ike ịgụnye ebe achọrọ na ngwa ahụ.
Iji budata Weather & Radar, họrọ sistemụ arụmọrụ: Android / iOS.
5. Oge Brazil
Otu ihe kachasị adọrọ mmasị nke Tempo Brasil bụ ohere nke inwe mmegharị ahụ dabara adaba nke na-enye ohere iji anya nke uche hụ mgbanwe ihu igwe ngwa ngwa. Na mgbe niile mmelite, ozi niile na-adị mfe hụrụ na kensinammuo interface.
I nwere ike ịjụ maka ihu igwe rue ụbọchị iri tupu. Ihe niile na akụkọ zuru ezu, nke gụnyere ozi gbasara mmiri ozuzo, ifufe, ụzarị ọkụ ultraviolet, nrụgide nke ikuku, n'etiti ọtụtụ data ndị ọzọ.
Kwadoro maka ekwentị na mbadamba, na Tempo Brasil ị nwere ike ịnweta eserese mmekọrịta, na-eme ka ọ dị mfe ịchọta kpọmkwem ọnọdụ ebe a họọrọ maka ihe omume ma ọ bụ njem. Kwesịrị ekwesị maka onye ọ bụla chọrọ ngwa dị mfe ma dị irè.
Iji budata Tempo Brasil, họrọ sistemụ arụmọrụ: Android / iOS.
6. Amụma ihu igwe
Iji ngwa a, ị nwere ozi n’oge, na-enwe ike ịga hụ ihu igwe na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa niile. Site na Rio de Janeiro ruo London, site na New York ruo Tokyo, ị na-ada ụda mgbanwe ihu igwe pere mpe ma kwadebe maka otu ụbọchị na-enweghị ihe ndapụta.
Na mgbakwunye na data okpomọkụ, Weather Forecast na-egosiputa ozi na akụkọ zuru ezu, na ogo Celsius na Fahrenheit. Nwere ike ịchọta nrụgide nke ikuku, visibiliti, iru mmiri ikuku, mmiri ozuzo n'akụkụ dị iche iche na maapụ mmekọrịta, ọsọ ikuku na ụzọ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Mba wijetị enwere ozi emelitere oge niile, na-enwe ike ịga ihu igwe nke ụbọchị ma ọ bụ izu ndị na-abịa.
Iji budata amụma ihu igwe, pịa ebe a.
Na ngwa ndị dị n'elu, enwere ọtụtụ ozi gbasara ihu igwe na mgbanwe mberede nwere ike ibibi atụmatụ maka ụbọchị dị ịtụnanya. Kpachara anya maka mmiri ozuzo ka aghara ijide gị.
Ugbu a na ị nwere ụfọdụ ozi na ịghara ịmịnye mmiri na-arụ ọrụ, kedụ maka ịmara ngwa ngụta 10 wee debe oge ole fọdụrụ ruo agbamakwụkwọ ma ọ bụ njem ahụ dị ịtụnanya?
Iji nye a agbam ume ka obi, anyị na-egosi na ngwa nke 8 nkebi ahịrịokwu na-akpali gị kwa ụbọchị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na mmiri na-ezo ugbu a ma ị na-aga ọrụ ma ọ bụ mahadum, anyị nwere ngwa iri iri iji gụọ akwụkwọ na ekwentị gị ma nwee ọ momentsụ oge na-agwụ ike ịmụ ma ọ bụ nwee anụrị.